Glass Voankazo & Candy Plate, sakafo
Ice Cream kapoaka
Miezaka ny tena tsara isika, tsy tapaka ny fanatsarana sy ny zava-baovao, dia nanolo-tena ho antsika ny "mpanjifa matoky", ary ny "safidy voalohany ny injeniera Accessories milina marika" mpamatsy. Mifidiana antsika, fizarana ny fandresena fandresena-zava-misy!
YIWU shuangbei fitaratra vokatra orinasa naorina tamin'ny taona 2006, ary manokana ao amin'ny fitaratra orinasa mpamokatra entana, sy ny famolavolana fitaratra fitaratra fanodinana nandritra ny folo taona. Ny orinasa manizingizina ny hevitry ny siansa famokarana, ny fitantanana henjana sy hitandrina fanavaozana, tato anatin'ny taona vitsy, dia efa nivoatra ho iray amin'ireo tsara indrindra orinasa fitaratra ao Shina. Company vokatra tsy hahatratra ny tonga soa ny Aziatika mpanjifa sy Aostralia mpanjifa, fa koa mandritra ny fotoana maharitra hanao fiaraha-miasa amin'ny orinasa sasany any Eoropa sy Amerika. Noho ny fitomboan 'raharaham-barotra tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny orinasa no manorina orinasa vaovao any Shanxi ary nampahafantatra mandroso orinasa mpamokatra entana, sy ny fanodinana fitaovana, isika ihany koa nanangana matihanina endrika ekipa mba hanao ny sasany tolotra toy ny applique, sokitra, dipoavatra loko, sandblasting, volamena mba hanatsarana tena ilaina ny mpanjifa ny vokatra, izany hahatonga azy ireo bebe kokoa mifaninana ao an-tsena. Company vokatra ahitana solon vokatra toy ny eny, ny rano fitaratra, vazy, fitaratra lovia, kettle, fanaovan-jiro, sns divay, ary samy hafa ny milina trano vokatra: toaka kaopy, kapoaka kely, rano kapoaka, labiera mug, kettle, fasiana tain-tsigara, sns
Ny Faritra atsimon'i Eoropa
rehetra izay namanay vokatra no nitranga SGS, FDA, BV sy LFGB fitsapana, dia afaka miantoka ny fiarovana tanteraka sy practicability ampiasaina. Mampanantena izahay; dia mampiasa ny kilasy voalohany-toetra, tsara asa fanompoana, fiaraha-miasa mavitrika, eo amin'ny fifanakalozana ny matoky ny hanorina ny hoavy mamirapiratra miaraka. Yiwu shuangbei entana orinasa fitaratra dia matihanina izay orinasa mpanamboatra manokana amin'ny fitaratra vokatra, dia manana toetra ara-tsiansa tanteraka ny rafitra fitantanana. Yiwu shuangbei fitaratra vokatra orinasa manana laza tsara any Shina, mafana namana tonga soa avy izao tontolo izao rehetra mba hamangy ny orinasa sy hanao raharaham-barotra miaraka amintsika.
Telephone: 0579-85011919 Fax isa: 0579-89940449
No.B8602, Haike Electronic Business Park, Huancheng Atsimo Road, Yiwu City, Zhejiang Provice, Sina, 322000